စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ linear လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ linear လျှပ်စစ် actuator
ယန္တရားဖော်ထုတ်မယ် 1. Valve အနေအထား
Real-time အဆို့ရှင် detect လုပ်ဖို့တိုက်ရိုက်က output ရိုးတံအပေါ်ထိန်သိမ်း၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဂီယာထိန်းချုပ်မှုယန္တရားနှစ်စုံမှတဆင့်လွတ်လပ်စွာအပြည့်အဝပွင့်လင်းအပြည့်အဝတံခါးပိတ်အနေအထား positionand ။ ဒါဟာအများဆုံးတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်။
AOX-L ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန် linear လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 2. စကေးစားပွဲပေါ်မှာ
အဆိုပါစကေးစားပွဲပေါ်မှာစောငျ့ရှောကျဖို့ပိုအလိုလိုသိနှင့်အဆင်ပြေသောလမ်းညွှန်လှံတံပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
All-သတ္တု plug-in ကို installation ကိုသုံးပြီးအလွန်အမင်းဘက်ပေါင်းစုံ, အနိမ့်ပါဝါကို Microcontroller တွေနဲ့ Analog circuit ကိုရောထွေး control panel ကို အသုံးပြု. AOX-L ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန် linear လျှပ်စစ် actuator ကြောင့်ထိထိရောက်ရောက် actuator မော်တာအပူနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ခွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်, အလွန် software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အပူချိန်ခုခံဆန့်ကျင် jamming ။
AOX တစ်ခုသာအစိုင်အခဲ software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံအုတ်မြစ်ရေရှည်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်သည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း, အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု, ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အမျှအချို့အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာကိုကူညီခဲ့စနစ်များ, တည်စေပြီ။ CNC စက်စင်တာနှင့်အတူတစ်ဦးကတိစက်ပလက်ဖောင်းအဓိကတည်တတ်၏အဖြစ်။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျတျောတို့ AOX-L ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန် linear လျှပ်စစ် actuator စိတ်ဝင်စားအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ customers.If ပို reailable ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မယ့်မှတ်တမ်းတင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတည်ထောင်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်လိမ့်မည်, E-mail ကို [email protected] ဖြင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ AOX-L ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန် linear လျှပ်စစ် actuator ဖော်ပြရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏လူကြိုက်များမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတက်ကြွစွာဂျာမဏီ Valve လောက, AHEMA, ရုရှား PCV ကုန်စည်ပြပွဲ, ECWATCH, မလေးရှား ASIA မှရေအတွက်, အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာအဓိကပြပွဲများတွင်ပါဝင် ထိုင်း THAIWATER, အင်ဒိုနီးရှား Indowater, ရှန်ဟိုင်း Flowtech, etc.You သမျှသောဤပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဖြေကျနော်တို့ Manufactory Ruian, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်, အနှစ် 20 ကျော်အဘို့အ AOX-L ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန် linear လျှပ်စစ် actuator အတွက်အထူးပြုနေကြသည်။
မေး: AOX-L ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန် linear လျှပ်စစ် actuator အဘို့သင့်အဓိကစျေးကွက်ကဘာလဲ?
hot Tags:: စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ linear လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်